दशैं मनाएर काठमाण्डौ फर्किदै हुनुहुन्छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोस – Khabar Silo
विभिन्न ठाउँबाट आउनेहरुको संख्या बढेसँगै स्वभाविक रुपमा सं क्रम ण बढ्ने उच्च जोखिम पनि रहन्छ । सार्वजनिक यातायातमार्फत् उपत्यका भित्रिनेहरुमा अझबढी सं क्रम ण हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्तै सार्वजनिक यातायातमा तथा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापद ण्ड पालना नगर्दा पनि सं क्रम णको जोखिम बढेको हो ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सं क्रम ण बढ्ने जोखि मको आकलन गरेर सरकारलेपूर्व तयारी गरिसकेको बताए ।
हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट र आइ सो लेस न वार्डको तयारी गरिसकेको उनले बताए ।सं क्रम णको जो खि म कम गर्ने पहिलो दायित्व व्यक्ति स्वयम्को भएकोले सरकारले का रबा ही गर्छु भन्दै ड र देखाएर जो खि म कम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । त्यसैले व्यक्ति स्वयंले पनि काठमाडौँ फर्किसकेपछाडि कम्तिमा एक हप्ता क्वारे न्टाइनमा बस्न सरकारले अनुरो ध गरेको पनि प्रवक्ता गौतमले बताए ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. समिरमणि दिक्षितले भने दसैँमा घरबाट फर्किएर काठमाडौं आउनेहरुबाट सं क्रम ण फैलने भन्दा उपत्यका भित्र रहेकाबाट नै सं क्रम ण फैलने सम्भावना बढी रहेको बताए । गाउँ भन्दा काठमाडौं उपत्यकामा नै सं क्रम ण उच्च भएकोले बाहिरबाट आउनेहरु नै जोगि नुपर्ने बताए ।काठमाडौंमा सं क्रम णमा नपर्नका लागि नियमित रुपमा मास्क लगाउने, दुरी कायम गर्ने र भि डभा डमा नजाने गर्नुपर्ने दिक्षितको भनाइ छ ।
जाडो मौसममा घर भित्र खुला वातावरण नहुने भएकाले पनि धेरै साव धा नी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जोखि म समूहमा पर्ने व्यक्तिहरुलाई जोगाउनका लागि घर भित्रै पनि अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आफू बाहेक अरु सबै सं क्रमि त छन भन्ने सोच बनाई सा वधा नी अपनाउन डा. दिक्षितको आग्रह छ ।
यस्तै राज्यले पीसीआर परीक्षणलाई अझ व्या पक बनाउनुपर्ने उनले बताए । जाडो मौसम रु घाखो की लाग्ने समय भएकाले पनि मौसमी रु घा खो की हो वा कोरोना हो छुट्याउन समुदायस्तरमा नै निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
संखुवासभाकाे मादी नगरपालिका १ उम्लिङमा एकै परिवारका ६ जनाको बी भत्स ह त्यापछि त्र सित बनेका छिमेकी चन्द्रबहादुर थापा घर सरेका छन् । आफन्त समेत रहेका थापा घटनास्थल भन्दा केही दुरीमा रहेको उम्लिङ मावी नजिकै सरेका हुन् । मृतक ५२ वर्षीय कमलाका काका चन्द्रबहादुर भन्छन् ‘बसिसक्नु भएन घर भित्रै पनि मनमा चिसो पस्न थाल्यो त्यही […]
३ जेठ, काठमाडौं । ब्राजिलमा एकैदिनमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित फेला परेका छन् । शुक्रबार ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १५ हजार ३०५ नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन् । यससँगै ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या पनि दुई लाख १८ हजार दुई सय २३ पुगेको छ । […]
यसरी तिर्न सकिन्छ मोबाइलबाट ट्राफिक जरिवाना : बैंक जानु नपर्ने
काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताले अब बैंकमा गएर जरिवानाबापतको रकम तिर्नुपर्ने समस्या हट्ने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चालकले क्यूआर कोडबाटै जरिमाना भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेकाले यो समस्या हट्न लागेको हो । महाशाखाले आज बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रमको थालनी गर्ने भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले यसका लागि क्यूआर कोडबाट पनि भुक्तानी […]